Blueys Beach, New South Wales, i-Australia
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Quentin
I-Blueys Shack ithathwa njengesimanjemanje emjondolo wase-Australian beach. Yakhelwe ngo-2018, le ndawo yokubalekela enamakamelo amabili inobuhlakani futhi yakhiwe kahle. Idizayinelwe ukugcizelela ukusetha kwayo okumangalisayo kwe-tropical futhi ibekwe endaweni elangeni usuku lonke, kulula ukuyibuyisela emuva futhi uphumule lapha.
Kungenjalo, ungathatha i-malibu nesambulela solwandle uhambo oluyi-100m ukuya ekugcineni okuhle eningizimu yeBlueys Beach.
Bona @blueysshack ku-Instagram ukuze uthole okwengeziwe :)
Ingxenye eyenziwe ngaphambilini (eyenziwe eMelbourne) futhi ingxenye yokwakhiwa kwe-bespoke, iBlueys Shack ingeyesimanje futhi ihlukile. Ekupheleni kuka-2017 amamojula amabili aqukethe ikhishi namagumbi okulala alahlwa endaweni yawo. Sabe sesinomakhi onethalente elikhulu & umngane owenza ifenisha ukuthi ayosebenza ekuvaleni igebe phakathi kwamamojula. Indawo yokuhlala (kufaka phakathi iminyango emikhulu eyenziwe ngezandla namafasitela akhiwe ngokwezifiso), igumbi leshawa kanye nompheme ozungezile konke kwenziwa ngenhlanganisela yezingodo ezinhle zasendaweni nezibuyisiwe zeBlackbutt. Ngokulandela umkhondo omncane engqondweni, siklame indlu ukuthi ivuleke endaweni yayo enhle futhi sisebenzise ngokugcwele indawo yayo esenyakatho enelanga nendawo eshisayo. Umphumela uba umjondolo opholile osebhishi esithemba ukuthi uzokuthanda ukuhlanganyela kuwo.
Okuningi mayelana nesigaba ngasinye:
Izicabha ze-pivot ezenziwe ngezandla zishwibeka ziphumele endaweni ethandekayo yokuhlobisa futhi zidale indawo enkulu evulekile. Umoya wasolwandle uzogeleza kulesi sigaba ukuze ugcine umjondolo upholile phakathi nezinyanga zasehlobo. Ezinyangeni ezimbalwa ezibandayo, iminyango namafasitela e-louvre angavalwa futhi indawo yomlilo yaseNectre ikhanyiswe ukuze kutholakale indawo ethokomele. Ifakwe ne-MCM House sofa nezihlalo zothando kuyinjabulo ukubuyela lapha nganoma yisiphi isikhathi sonyaka!
Amabhentshi kakhonkolo kanye nebha yasekuseni kwakhiwe ngokwezifiso umngane eSydney. Ziyingxenye emangalisayo ekhishini elifakwe kahle. Amafasitela 'eloli lokudla' avuleleka kubha yebhulakufesi futhi ahlotshiswe ukuze akhe indawo enhle yokulenga ngenkathi upheka. Ngohhavini we-Bosch nokupheka okuphezulu, izitsha zekhwalithi ephezulu (imibese ye-Victorinox) kanye nomshini wekhofi we-Mocha Master (ikhofi elikhethekile elihlinzekwa!) lenzelwe ukujabulela isikhathi sokupheka amadili.
Esinye isigaba esibalulekile. umqondo wawungukuletha ishawa ngaphandle futhi kungene izitshalo!
Qaphela ukuthi indlu yangasese nelondolo (nomshini wokuwasha we-Bosch & dryer) kuxhunywe kulesi sikhala.
Igumbi lokulala elilodwa linombhede wendlovukazi futhi libheke ngefasitela elikhulu engadini yasezindaweni ezishisayo. Igumbi lokulala lesibili linemibhede emikhulu eyenziwe ngezandla ezimbili, kanye nombhede omusha we-porter. QAPHELA: Ilineni namathawula yi-BYO. Uzodinga ukuthi uze namashidi akho aphezulu naphansi. Ukuqashwa kwelineni kwasendaweni kuyatholakala, bheka ngezansi
Ibekwe ngaphandle kwekhishi, kunehlathi elincane elifihliwe eline-BBQ eshisiwe ngokhuni kanye netafula elakhiwe. Sicela uqaphele, i-BBQ ayivunyelwe ngesikhathi sokuvinjelwa komlilo futhi kufanele kuqashelwe kakhulu uma usebenzisa.
4.82(125 okushiwo abanye)
4.82 · 125 okushiwo abanye
UQuentin Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: PID-STRA-5486
Hlola ezinye izinketho ezise- Blueys Beach namaphethelo